STIMU နှင့် University of Bedfordshire UK (UOB)၊ The Open University of Hong Kong (OUHK)တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်မည့်
BA ( Hons ) Business Administration, BA ( Hons ) Accounting, BBA in Management တန်းခွဲသစ်များအတွက်ကျောင်းအပ်လက်ခံနေပါပြီ။ ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်??? --------------------
Foundation မှ ဘွဲ့ရရှိသည်အထိ သင်တန်းကာလ ၃နှစ် ၆လခန့် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း / IGCSE အောင်မြင်ပြီးသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Back to School Promotionအဖြစ်
အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မတိုင်မှီ ကျောင်းလာရောက်အပ်နှံမည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအား USD 400 / Laptop / Tablet ပြန်လည်ပေးအပ်ပါမည်။ ဘာလို့တက်ရောက်သင့်သလဲ ???
ရန်နိုင်ငံတကာနည်းတူသေးငယ်သောစာသင်ခန်းများဖြင့်ကျောင်းသားဗဟိုပြုဆွေးနွေးခြင်းစနစ်ဖြင့်ပြည်တွင်းပြည်ပမှအတွေ့အကြုံရှိဝါရင့်ဆရာဆရာမကြီးများမှသင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိခြင်း။ Assignment များ ၊ Project များကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများအားကိုယ်တိုင်ရေးသားစေခြင်း/အမြဲမပြတ်လုပ်ဆောင်စေခြင်းတို့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာပြီး
အလေ့အကျင့်ကောင်းများရရှိလာစေခြင်း။ ကျောင်းတွင်း Library ခန်းများထားရှိပေးခြင်း နားမလည်သည့်စာများကိုလည်းဆရာ/ဆရာမများမှအားလပ်ချိန်များတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား နားလည်သဘောပေါက်သည်အထိ သင်ကြားပို့ချပေးသည့်အပြင် Personal Acedamic Tutor ( PAT ) များထားရှိပေးခြင်းကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ
အနေဖြင့်များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်း " Nurturing All-Round Leaders " ဟူသော ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ မိမိတို့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ကျောင်းသင်ခန်းများ စာအပြင် ယနေ့လူငယ် နောင်ဝယ်လူကြီးဆိုသကဲ့သို့ ကျောင်းသားများအား တာဝန်ယူတတ်စေရန် ကျောင်း၏ ပွဲတော်ကြီးများအား Student Council သို့ လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်ပေး၍ နောက်လိုက်ကောင်းများ နှင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ မွေးထုတ် ပေးလျှက် ရှိခြင်း ကျောင်းလခများအား ဘဏ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Education Loan Program ဖြင့်လည်းကောင်း Installment Plan ဖြင့်လည်းကောင်း အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ပေးသွင်းနိုင်ခြင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ... STI MU ( MICT Campus )
099 55 1234 46-9 STIMU ( MDY Campus )
No. ( B- 15/16 ) , 66th လမ်းနှင့် သဇင်လမ်းထောင့်၊
09 78 3800062 ~ 64